गर्भवतीले कसरी खेल्ने होली ? - Bidur Khabar
गर्भवतीले कसरी खेल्ने होली ?
विदुर खबर २०७४ फागुन १६ गते ११:५१
रङ, अबिर, मिठा परिकार अनि भाङ्ग । पिचकारी र बेलुनको बर्षा । फागुन पूणिर्मा अर्थात होली । रमाईलो र मस्तीले भरिएको पर्व । आफ्नो छुट्टै पहिचान बोकको ‘होली’ सम्झदा पनि मनमा उमङ्ग छाउँछ ।
साथीभाई तथा आफन्तसँग औपचारीकताका सारा सिमा तोडेर एउटा छुट्टै रमाईलो अनुभुति गराउने रसिलो चाड पनि हो, होली । न जाडो न त गर्मी । मौसमले पनि रमाईलो बनाएको हुन्छ होलीलाई । तर, जोसमा होस पुर्‍याउन सकिएन भने रंगहरुको यो पर्व बेरंगको पनि हुनसक्छ ।
गर्भवतीले होली नखेल्ने ?
यस्तो रमाईलो माहोलमा गर्भवती महिला सरिक हुने कि नहुने ? साथिहरु तथा आफन्तसँग होली खेल्दा गर्भको बच्चालाई असर हुन्छ कि हुदैन ? मिठो परिकारको आनन्द लिने कि नलिने ? धेरैलाई जिज्ञासा हुनसक्छ ।
परिवारका अन्य सदस्य झै, गर्भवती पनि होलीमा सहभागी हुन, गुणस्तरिय रङ्ग खेल्न र सुपाच्य भोजनको मज्जा लिनसक्छन् । तर होली खेल्दा सजग चाँहि हुनैपर्छ ।
भागदौड, लुकिछुपी अनि खेलखेलमा लडिने वा चोट लाग्ने हुनसक्छ । यस्तो चोट घातक हुनसक्ने भएकोले होसियार हुनैपर्छ । संयमित भएर होली खेल्ने र रमाउने गर्नुपर्छ ।
घातक रसायन नदल्ने
होलीमा प्रयोग गरिने रंगहरु सस्ता र कम गुणस्तरका हुनसक्छन् । त्यसमा पनि कम गुणस्तरको रातो रंगमा मर्करी सल्फेट नामक रसायन प्रयोग गरिएको हुन्छ । यो रसायन छालाबाट अवशोषित भएर रगतमा जान्छ र त्यसले छालाको क्यान्सरसम्म गराउनसक्छ । आँखाको दृष्टि कमजोर बनाउँछ र पक्षघातसमेत गराउनसक्छ ।
मर्करी सल्फेटले गर्भको बच्चाको बृद्धिमा असर गर्ने भएकोले गर्भवतीले यस्ता रंगहरुको प्रयोग गरेर होली खेल्नु हुदैन ।
डा. बालकृष्ण शाह हरियो रंगमा कपर सल्फेट भन्ने रसायन प्रयोग गरिएको हुन्छ । कपर सल्फेटका कारण बिशेषगरी आँखा चिलाउने, सुन्निने, रातो हुने तथा केहिबेर अन्धो बनाउन सक्छ । त्यसैले यो रंग पनि गर्भवति महिलाले प्रयोग गर्नु हुदैन । यसले गर्भको बच्चाको बृद्धिमा असर गर्छ । हड्डी कमजोर बनाउँछ । र्भपतनसमेत गराउनसक्छ ।
निलो रगंमा प्रयोग हुने प्रसियन ब्लु भन्ने रसायन रगतमा नसोसिने हुने भएकोले यसले छालामा मात्र असर गर्छ । यसबाट छाला चिलाउने तथा फोका आउने हुनसक्छ । यसले भने गर्भमा खासै असर गर्दैन । अबिरमा पनि सिसाका धुलो हुने भएकोले गर्भवतीले नदल्नु नै राम्रो ।
अहिले बजारमा अनुहारमा पनि लगाउन मिल्ने र छालामा कुनै असर नगर्ने, सजिलै पखालिने किसिमका रंगहरु पाईन्छन् । मेहन्दी तथा अन्य हर्बलबाट तयार गरिएका रङ तथा अबिरहरु बजारमा उपलब्ध हुने भएकाले गर्भवती महिलाले यस्ता रङ तथा अविरले रमाईलो गर्न सक्छन् ।
खानपीनमा सजग हुने
होलीमा रंग र अबिर खेल्नुका साथै मिठ परिकारको पनि मज्जा लिने गरिन्छ । मालपुवा, मिठाई, सेल, पुरी अनि मासु घरघरमा बनाइएको हुन्छ । समान्यतया यी खानेकुरा चिल्ला हुन्छन् ।
गर्भवती महिलाले यस्ता गरिष्ठ र अपाच्य परिकार सकेसम्म नखानु नै उत्तम । आफुलाई रुचेको र पचाउन सजिलो हुने खानेकुराको मज्जा गर्भवती महिलाले पनि लिन मिल्छ । उनीहरुले थोरै थोरै गरेर धेरै पटक खाने बानी बसाल्दा उत्तम हून्छ ।
हुन त होलीमा भाङ्ग, गाजा, मद्यपान गर्ने चलन पनि छ । गर्भवती महिला त्यसबाट टाढै रहनुपर्छ ।